Win 100 000 Kyatts in June Jobless promotion ﻿
Win 100 000 Kyatts in June Jobless promotion
Tags: promotion CV jobs in Yangon work
အသုံးဝင်သောစိတ်ချမ်းသာစရာများ ကို ရရှိပြီး ဆက်သွယ်ရန် မလွယ်ကူပါ။ တစ်ချိန်တည်းတွင် လူကြီးမင်းသည် အလုပ်တစ်ခုကိုရှာနိုင်သကဲ့သို့ ဆုငွေတစ်သိန်းကို လည်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ CV သည် ကျွနု်ပ်တို့ထံတွင် အမြဲရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး ကြိုက်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် www.jobless.com.mm အမြန်ဆုံးပဲ CV ကို တင်လိုက်ပါ။
* လူကြီးမင်း၏ CV သည် အစစ်အမှန်ဖြစ်သင့်ပြီး အချက်အလက်အမှန်ကိုသာ ဖြည့်သင့်ပါသည်။ Promotion တွင် ၆၀% အောက်ဖြည့်ထားသော CV များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
ကံကောင်းပါစေ။ မြန်မြန်ပဲ CV ကိုတင်ပါ။ Promotion က June 30th မှာ ပြီးမှာနော်။
It has never been easier to connect useful with pleasant things. You can find job and win 100 000Kyatts at the same time. Your CV will stay and can be used any time, so do not hesitate and post your CV on Jobless now!
We will declare the winner of 100 000 Kyatts in first week of July!!!!!
*Your CV should be real one and filled with correct information. All CVs bellow 60% fullfilness will be not counted to the promotion.
Good luck and hurry. Promotion finnishes June 30th